लेखक व्यवस्थापकमा प्रकाशित अप्रिल 3, 2019 सेप्टेम्बर 14, 2020 एक टिप्पणी छोड्नुहोस् zu 1xBet App – मोबाइल 1xBet अनुप्रयोग अघि- र मोबाइल संस्करण को नुकसान
"मोबाइल पहिले" 1xBet को एक आदर्श वाक्य हो. अन्य धेरै शर्त प्रदायकहरूको विपरित, १xBet शुरूदेखि नै खेल शर्त उत्पादनहरूको लागि मोबाइल संस्करणमा भर पर्‍यो।, के यो साँच्चै मूल्यवान थियो. किनभने यो अनुप्रयोग एक राम्रो खेल सट्टेबाजी अफरहरू हो जुन स्पोर्ट्स शर्तहरू वर्तमानमा यूरोपीय बजारमा उपलब्ध छ.
तपाइँले के याद गर्नुहुन्छ जब 1xBet अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा र तपाइँले केहि डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दैन, म मेरो संक्षिप्त सिंहावलोकन मा देखाउँछु.
तपाईं बीच द्रुतको लागि:
एन्ड्रोइड अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्!
एन्ड्रोइड x.० वा उच्च आईफोन अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्!
आईओएस x.x वा उच्च
1xBet अनुप्रयोग - अनुप्रयोग
1xBet शर्त प्रदायकहरू बीच एक वास्तविक गोप्य शर्त हो, जुन मुख्य रूपमा बिभिन्न शर्त बजारहरूको कारणले हो. सम्म 1.000 खेल प्रति बिभिन्न शर्त विकल्पहरू सम्भव छ. थप रूपमा, तपाई यस भन्दा बढिबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ 220 भुक्तानी विधिहरू छनौट गर्नुहोस्.
कर मुक्त शर्त
त्यसोभए तपाईंले १xBet अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुभयो. यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्, अनुप्रयोग संग शर्त गर्न
तपाईंको सेल फोन बन्द गर्नुहोस्, हाम्रो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् वा यो लि follow्क पछ्याउनुहोस् र मोबाइल पृष्ठ खुल्नेछ - डाउनलोड वा स्थापना बिना.
तपाईंको स्क्रीन अब शब्दहरु संग एक हरियो बटन देखाउँदछ "दर्ता गर्नु" माथि. यसमा क्लिक गर्नुहोस् र दर्ता फारम खुल्नेछ. तपाईं चार फरक तरीकाले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हामी संक्षिप्त रूपमा हाम्रो १xBet परीक्षणमा वर्णन गर्दछौं.
तपाईं भन्दा बढी जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ 200 भुक्तानी विधिहरू चयन गर्नुहोस्, विभिन्न क्रेडिट कार्ड सहित, Skrill, नेटलर, Paysafecard वा GiroPay. दुर्भाग्यवस त्यहाँ कुनै पेपैल छैन.
FAQ - १xBet अनुप्रयोगको बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तरहरू
के मैले अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न वा स्थापना गर्न आवश्यक छ??
कुनै, 1xBet ले भनिन्छ एक मोबाइल संस्करण प्रदान गर्दछ "वेब अनुप्रयोग" एक. अर्को शब्दमा, सक्कली एप्लिकेसनमा सक्कली एप्लिकेसनको समान कार्य छ, बाहेक अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न वा स्थापना गर्न कुनै आवश्यकता छैन.
ध्यान AppStore मा 1xBet अनुप्रयोग प्रदायकबाट आउँदैन!
अनुप्रयोग नि: शुल्क र सुरक्षित छ?
सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ, किनकि तपाईले कुनै पनि डाउनलोड फाइलहरू डाउनलोड र स्थापना गर्नुपर्दैन, 1xBet पृष्ठ खोल्नुहोस्, जुन उच्च सुरक्षा मापदण्डहरु संग सुसज्जित छ. तपाइँको नियमित इन्टरनेट शुल्कको बाबजुद, कुनै शुल्क छैन.
त्यहाँ एक समान 1xBet आईट्यून्स मा छन्?
AppStore मा नाम सहित दुई अनुप्रयोगहरू छन् "1xBet विकल्पहरू" र "1xBet क्यालकुलेटर". दुबै प्रदायकबाट आउँदैनन् र कर लगाउने अधिकारको हकदार छैनन्. सहि अनुप्रयोग, जुन तपाईं पनि 1xBet मा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड संस्करणको रूपमा वर्णन गरिएको छैन.
मोबाइल फोन द्वारा भुक्तान कसरी कार्य गर्दछ??
केवल लगइन स्थितिमा भुक्तानी मेनू कल गर्नुहोस् र इच्छित भुक्तानी विधि चयन गर्नुहोस्. सबै 1xBet भुक्तानी विधिहरू गो गोमा पनि उपलब्ध छन्.
1xBet एपीके डाउनलोडको मतलब के हो?
एन्ड्रोइड उपकरण प्रयोगकर्ताहरूले एपीके फाइलहरू डाउनलोड गर्न र उनीहरूको फोनमा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सक्दछन्. Apk फाइल पृष्ठ १xBet मा छ.
स्थापना सक्षम गर्न, तपाईंले फोनमा आफ्नो सुरक्षा सेटिंग्स एकदम आराम गर्नुपर्दछ, जसले स्वचालित रूपमा तपाईंको उपकरणलाई नचाहिने ट्राफिकमा बढी कमजोर बनाउँदछ. म व्यक्तिगत रूपमा सोच्छु, त्यो एपीके फाईल आवश्यक छैन, किनभने अनुप्रयोग बिना स्थापना बिना राम्रोसँग काम गर्दछ.
के म मेरो मोबाइल फोनमा नि: शुल्क १xBet बोनस पनि खेल्न सक्छु??
र, समस्या छैन. सबै, जो नियमित रूपमा एक सेलुलर आधार मा शर्त, अनियमित रूपमा एक अतिरिक्त बोनस प्रचारात्मक मूल्य प्राप्त गर्नुहोस्.
के म सबै शर्त प्रस्तावहरु का उपयोग गर्न सक्छु?
र, खेल शर्तको साथसाथै, यो लाइभ क्यासिनो पनि हो. स्लट खेलहरू उपलब्ध छन्.
कुन उपकरण चलिरहेको छ 1xBet अनुप्रयोग?
हामी सेलुलर संस्करण को सफलतापूर्वक आईओएस अपरेटिंग प्रणाली मा सफलतापूर्वक छ, एन्ड्रोइड, विन्डोज फोन र ब्ल्याकबेरी ओएस परीक्षण गरियो. यो अनुप्रयोग कोर्स मात्र सेल फोनका लागि उपयुक्त छैन, तर आईप्याड वा ग्यालक्सी ट्याब्लेट जस्ता ट्याब्लेटहरूका लागि पनि.
अनुप्रयोगको लागि मैले कुन ईन्टरनेट ब्राउजर प्रयोग गर्नुपर्छ??
यदि तपाईं गुगल क्रोम प्रयोग गर्नुहुन्छ, सफारी, ओपेरा, फायरफक्स वा इन्टरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग गर्नुहोस्, अनुप्रयोग भन्दा फरक छैन. १xBet अनुप्रयोगको लागि प्रमाणित
तथ्य, त्यो १xBet ले मोबाइल संचारमा आफ्नो फोकस पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन गरेको छ, यो धेरै वास्तविक बनाउँछ. यो अनुप्रयोग यसको नेभिगेसन र स्पष्टताका साथ चम्किन्छ, जुन धेरै सजिलो छ. द्रुत लोड हुने समय, सहज जम्मा र निकासी सुनिश्चित, यो सेलुलर संस्करण बजार मा सब भन्दा बलियो एक हो कि.
मा प्रकाशित अप्रिल 3, 2019 सेप्टेम्बर 14, 2020 लेखक व्यवस्थापक
अघिल्लो पोस्ट:1xbet दर्ता – दर्ता – सट्टेबाजी
अर्को पोस्ट:1xbet बोनस 100% € सम्म 130 + 300 EXCLUSIVE बोनस पोइन्टहरू!
एक टिप्पणी लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्
तपाइँको ईमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन. आवश्यक क्षेत्रहरु संग छन् * चिह्नित.